トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Umahluko kombono ngokomoya yaye nokuvumisa, umahluko izangoma ithamsanqa-mathamsanqa
Ngaba uyawazi umahluko phakathi umbono yokomoya nokuvumisa?
Abanye abantu basoloko bexakaniseka ithamsanqa amabali kunye litchi, kodwa yintoni Kukwafakwe umbono ngokomoya ingqikelelo esinjengokuvumisa ukuba ngqo.
abaxeli-nokuxela ukuba zihlelwe ngokwendidi ezintathu, ukuze bathi kungokuvumisa kwi
ilizwi umbono ngokomoya iqukiwe omnye wabo, enyanisweni, Inochibokusho (umthi onqabileyo kungenzeka) 3 kokuba zohlulwa ngokwendidi.
ubomi manani, feng shui, i abaxeli-exelela ngokususela kwidatha, ezifana ezokuqala nezokugqibela igama umgwebo.
Bok nokuvumisa esebenzisa uluvo lwesithandathu, umbono ngokomoya lichazwa apha. Iba ngokomoya, ezifana nokuba Bok (I). Kuyinto
isigaba ezifana caleni nesigaba ubuso, sebenzisa nokuvumisa data emzimbeni. uya kubizwa ngokuba isigaba (ngoko ke) xa usebenzisa izixhobo eziphathekayo, ezifana amakhadi bhula kunye neengcebiso.
ezithile, ezifana ngempembelelo bhula, kodwa kukho kwakhona indibanisela kwam sigaba, nceda ukhumbule yaye ngokusisiseko kukho iintlobo ezintathu.
Ngamanye amazwi, umbono ngokomoya nokuvumisa ayikho izinto ezahlukeneyo, kukuba umbono ngokomoya yenye yezi ntlobo ezintathu nokuxela ithamsanqa.
Njengoko kuchaziwe umahluko oosiyazi ithamsanqa-mathamsanqa
ngoku, ngenxa yokuba abenzi-lokuxoxa kanye litchi akuhlali lingana, izangoma ithamsanqa-mathamsanqa yahlukile. Ithi ukuba izangoma nalo abaxeli-mathamsanqa, kodwa abaxeli-mathamsanqa akutsho ukuthi izangoma. Abantu abane izangoma ezifana
umbono ngokomoya yaye ngokomoya, kodwa nina nithi ukuba a abaxeli-mathamsanqa yindlela izangoma, umntu lowo wenziwe wavumisa ngayo amanani okanye isigwebo igama ezokuqala nezokugqibela, kukho yi abaxeli-mathamsanqa akukho izangoma. Ukuba
Ukuze siqale ngenkcazelo emfutshane siya kuba yinto
umbono ngokomoya kunye nombono ngokomoya, izangoma kukuba ukubona umoya ngumgcini thethwano umntu, mayibonise ukufumana uthethwano va umyalezo ukusuka imimoya umgcini into.
umgcini oomoya nabani kuthiwa ukuba, njengokuba negama libonisa, kuba umoya ukukhusela abantu bayo. Xa thethwano owayezama Fumo endleleni embi, kuba phambi eya kukhokelela ukuba akuyi Fumihazusa endleleni.
Noko ke, abantu eqhelekileyo ayikwazi kuba nako ukufumana umyalezo ukusuka umoya umgcini, asikuko ukuba ukucela litchi ukuya izangoma.
ukuba ungathanda ukuba abe nembono yokomoya, akukho mqondo ukucela ingcali ukuya abaxeli-mathamsanqa
umahluko kombono ngokomoya nokuvumisa oosiyazi kunye umahluko abaxeli-mathamsanqa kutheni uyazi athi kukho imfuneko ngeendawo, xa ucela kukho apreyizali inkathazo into, ekuqaleni, cela ukuba lwentsebenzo ngokuzidela ukuze abe nabo ziphicothwa in izangoma ithamsanqa umbali, akukho ndlela konke konke.
Kakade, impendulo ayikwazi zingafumaneka ngaphandle kokuya ukubetha.
umbono umoya nayo disengaged be ukuvumisa umbono ngokomoya
ngamandla ukuba iprojekthi njengoko xifaniso ihlabathi kubonakala ukuba engqondweni oosiyazi. Nangona yena ukwisikhundla lokuthethana iqela kwaye izangoma amagqabi, umbono ngokomoya, nto scry othandwa kakhulu umnxeba nokuxela ithamsanqa.
Noko ke, kukho umahluko ngamnye ividiyo ukuze zibonakale, ngokuxhomekeke ukuhambisana kunye ngamaza thethwano izangoma abo, ukuze babe okanye wayengaboni kakuhle, unako ukuza off ngelishwa.
a izangoma yokwenene evela hits, kuba nje ngaphandle akuthethi akuthethi ukuba oosiyazi mbumbulu. Kungenxa yokuba iinkcukacha-manani malunga
ithamsanqa amabali, Kakade ke, wenza na isibakala sokuba 100 ekhulwini. Cofa apha ukuze bathi ngenxa yokuba ngaphandle, akuthethi abaxeli-mathamsanqa i fake.
sebali zingeyomfuneko ulwazi, ezifana umhla wokuzalwa kumbono ngokomoya
litchi na isitalato ngentla, ngenxa yokuba isenzo kokubonisa ividiyo ingqondo ka izangoma, ayifuni data, ezifana umhla wokuzalwa ezingxoxo leyo.
izangoma kudla ukuba umfanekiso erhanelekayo, kukho kakhulu kuba nalufefe, kodwa ezinye ngelishwa eneneni fake kwaye bogus izangoma, ukuba kukho imigulukudu ezinjalo bekuya kuba yinyaniso. Ukuze ngeke akucele ukuba i
fake, njengokuba indlela enye ukubona ukuba okanye hayi izangoma wokwenene, "abantu besiza kuva idatha umhla wokuzalwa kuyathandabuzeka" Kukho abantu. Noko ke, mna buqu oluchasene nale mbono. Xa usebenzisa Kwakhona
imbono yokomoya amandla, ukusebenzisa idata nokuba manani, zombini izangoma abaya kuzama ukuya kwi inkqubo (ithamsanqa umbali) ikhona nayo.
umbono ngokomoya ehambelanayo kunye kwamaza, kukuba kukho angalinganiyo kwinkangeleko yevidiyo. Yiyo ke loo nto yenze i-apreyizali kusetyenziswa iinkcukacha-manani ngendlela oluncediswayo sikholelwa ukuba iyavakala.
Ukongeza, ezinye oosiyazi ukuba umntu lowo wamkela data, ezifana umhla wokuzalwa kunye negama kuba ngokucacileyo ngakumbi lula ukubona ividiyo.
inene, njengendlela ukuxelela noba okanye hayi izangoma ngokwenene, ukuba ingaba okanye ukumamela umhla wokuzalwa iphepha litmus ke, kubonakala ukuba kukho isiphumo esithile. Noko ke, kwelinye icala nathi abakhulelweyo umngcipheko uhlobo kwakhona ezinjalo yokunciphisa Ukudibana amathuba okuba izangoma na.
Ngoko ke, nokuba izangoma kukuba ingaba wokwenene okanye fake, kusekho uluvo lwam kukuba nokuba kufuneka ukuba aye kuxela e esqwini yovavanyo eyahlukileyo.